Hitan'izy ireo fomba iray hamafana kaonty iCloud tsy misy teny miafina | Vaovao IPhone
Ignatius Room | | iCloud, IPhone Security
Nandre momba ny iCloud izahay tamin'ny 2011. Hatramin'izay dia isan-taona Apple dia nampiditra fiasa vaovao mba hahatonga azy io ho safidy tena ilaina ho an'ny mpampiasa rehetra ny vokatra Apple, na fitaovana finday na solosaina. Steve Jobs no nanolotra iCloud izay volana maro talohan'ny nahafatesany izay hiara-miasa amin'ny iOS 5 ary mamela anay hanana fampahalalana mitovy amin'ny fitaovana Apple rehetra, toy ny fifandraisana, kalandrie, antontan-taratasy rahona, Mail.
Araka ny tenin'i Steve Jobs fony izy nanolotra ny iCloud tamin'ny Konferansa ho an'ny mpamorona 2011:
Androany dia olana goavana sy mahasosotra tokoa ny fitazonana ny fampahalalana sy ny atiny rehetra ao amin'ny fitaovanao rehetra. iCloud dia mitazona ny fampahalalana sy ny atiny manan-danja amin'ny fitaovanao rehetra. Izany rehetra izany dia mandeha ho azy sy tsy misy tariby, ary satria tafiditra ao amin'ireo rindranasanay ianao dia tsy mila mieritreritra izany akory ianao, mandeha fotsiny.
1 Inona no atao hoe Lock Activation?
2 Hadinoko ny teny miafiko iCloud, inona no azoko atao?
3 Ahoana no hialana amin'ny fividianana fitaovana mihidy amin'ny iCloud?
4 Ahoana ny famonoana ny hidin-trano iCloud amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch
5 Ahoana ny fomba hamohana iPhone mihidy amin'ny iCloud amin'ny iOS 7
6 Ahoana ny fomba hamohana iPhone mihidy amin'ny iCloud amin'ny iOS 8
7 Ahoana ny fomba hamohana iPhone mihidy amin'ny iCloud amin'ny iOS 9 / iOS 10 / iOS 11
8 Azo esorina amin'ny jailbreak ve ny hidin-trano iCloud?
Inona no atao hoe Lock Activation?
Tamin'ny fahatongavan'i iOS 7 dia nanitatra ny fiasan'ny iCloud ny Apple tamin'ny fampidirana safidy ahafahantsika manidy ny iPhone raha sanatria misy fatiantoka na halatra. Noterena i Apple ampiharo io fampiasa io hanatsarana ny filaminan'ny mpampiasa, fa koa mba hiezahana hampihena ny fangalarana ity fitaovana ity, izay nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny vidin-javatra lafo dia be izay nahatonga azy io ho iray amin'ireo fitaovana irina indrindra eo amin'ny tsena mainty.
Misaotra ny hidim-pahavitrihana tafiditra ao amin'ny iOS 7, raha angalarina ilay fitaovana na very aminy isika, azontsika atao ny manakana ny fidirana amin'ny terminal ankoatry ny fitadiavana amin'ny fotoana rehetra misy azy, mety indrindra rehefa very na nanadino azy isika. Avy amin'ny tranokala iCloud no ahafahantsika mahita haingana ilay fitaovana, mampiseho hafatra eo amin'ny efijery mba hahafahan'izy ireo mamerina izany amintsika, manakana azy io, mamoaka feo na mamafa ny votoatiny rehetra avy eo . Raha vantany vao mihidy ny fitaovana dia tsy azo atao ny mampiasa azy raha tsy manana ny teny miafin'ny kaonty iCloud misy ifandraisany amin'ny terminal isika, amin'ity fomba ity mangalatra iPhone, iPad na iPod touch. asa tsy misy ilana azy io satria manova ny terminal ho lasa lanjan'ny taratasy sarobidy.
Ny maha-iOS 7 no kinova voalohany nahitana an'io asa io, ny hidy fampandehanana dia nisy bibikely mamela hamono ny finday iPhone, mba hahafahan'ny mpampiasa mahita na mahazo iPhone miaraka amin'ny iOS 7.1 hamaha ny terminal nefa tsy mila mampiditra ny teny miafin'ny kaonty iCloud izay nifandraisany. Ny lehilahy Cupertino dia naka fotoana kely fotsiny hamahana io lesoka fiarovana io ary amin'izao fotoana izao no hany fomba tokana hanokafana iPhone mihidy amin'ny iCloud tsy misy, farafaharatsiny amin'ny teôria, satria raha mikaroka amin'ny Internet isika dia afaka mahita fomba milaza fa mahavita. noho izany, fomba izay hazavaiko etsy ambany.
Hadinoko ny teny miafiko iCloud, inona no azoko atao?
Ny fanadinoana ny teny miafin'ny kaonty iCloud misy antsika ny terminal rehetra misy antsika dia tsy zavatra ratsy indrindra izay tsy mety hitranga, nanomboka tamin'izay Apple dia manolotra safidy hafa mahomby hahafahantsika mamerina azy io indray. Raha tsy tadidintsika ny teny miafin'ny kaontintsika, zavatra mety iraisana noho ny fampiasana Touch ID izay manakana antsika amin'ny ankamaroan'ny tranga tsy hiditra ny teny miafintsika, dia mila mandeha an-tongotra mankany amin'ny tranokala isika https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid, pejy iray omen'i Apple ho an'ny mpampiasa azy rehetra hanovana ny teny miafin'ny kaonty iCloud-ny.
Ny olana dia tonga rehefa tsy tadidintsika ny valin'ny fanontaniana lehibe napetrakay rehefa nanao sonia tamin'i Apple isika. Ataovy ao an-tsaina izany Apple dia tsy maintsy miantoka 100% fa isika no mpampiasa ara-dalàna ny amin'ity kaonty ity noho izany dia tsara foana ny manampy fanontaniana izay tadidintsika ary tsy azon'ny fahalalan'ny olom-pantatsika fantarina.
Amin'ireny tranga ireny dia voatery isika manararaotra ny iray amin'ireo fomba hafa Azontsika atao ny mahita an-tserasera raha tsy tiantsika ho lasa lanja taratasy mahafinaritra ny iPhone, iPad na iPod, satria tsy manome vahaolana antsika i Apple momba an'io, satria tsy olana amintsika ny tsy mahatadidy ny valin'ny lakile. fanontaniana napetrakay tamin'ny fotoana nandefasana anay.
Ahoana no hialana amin'ny fividianana fitaovana mihidy amin'ny iCloud?
Rehefa mividy fitaovana faharoa dia tsy maintsy jerentsika ireo lafin-javatra isan-karazany izay afaka manampy antsika hamantatra raha efa nangalatra ilay fitaovana na tsia. Voalohany indrindra, mila mahita ianao raha toa ka misy ny boaty sy ny charger ny fivarotana ilay fitaovana, satria ny headphones noho ny antony ara-pahadiovana dia matetika tsy mifandray amin'ny fifanakalozana. Ny terminal rehetra izay amidy raha ny boaty sy ny charger azy (misy doka maro toy izany) dia tokony tsy hatoky tanteraka azy ireo.
Faharoa, raha amidy miaraka amin'ny boaty sy charger tany am-boalohany (zava-dehibe) ny terminal dia tsy maintsy atao izany fantaro ny laharana IMEI na laharana serial an'ny fitaovana ary ampahafantaro azy ao amin'ny Pejy Apple izay ahafahantsika manamarina ny mombamomba ny hidim-pandaminana. Ity pejy ity dia hampahafantatra anay raha misy kaonty mifandraika amin'ny kaonty na, ny mifanohitra amin'izay dia efa navotsotra avy tao amin'ity sakana ity izy ary afaka ampiasain'ny olon-kafa miaraka amin'ny Apple ID anao.
Ahoana ny famonoana ny hidin-trano iCloud amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch
Hatramin'ny nahatongavan'ny iOS 7 isaky ny miditra ao amin'ny terminal izahay ny Apple ID ny Find My iPhone function dia mandeha ho azy, fiasa mamela antsika hanakana ny fitaovana lavitra. Ho fanampin'izay, ny terminal dia mijanona mifandraika amin'ny ID anay, ka raha very izany na angalarina dia isika ihany no afaka mamoha azy ary manohy mampiasa azy. Noho izany dia tsy tokony hasaina hanajanona an'io asa io mihitsy ianao. Mba hamohana Find my iPhone dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Miakatra isika Fikirana.
Ao anatin'ny fanovana dia mankany iCloud.
Ao anatin'ny iCloud no ahitantsika ny safidy Tadiavo ny iPhone / iPad / iPod-ko mikasika arakaraka ny terminal ampiasainay.
Amin'ny varavarankely manaraka atsofotsika ny jiro mba hanafoanana azy. Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy ampidirintsika ny tenimiafintsika hanamarinana fa isika no mpampiasa ara-dalàna ny terminal.
Ahoana ny fomba hamohana iPhone mihidy amin'ny iCloud amin'ny iOS 7
iOS 7 no fahatongavan'ny Find my iPhone function ary miaraka aminy ny activation lock, hidin-trano izay mamela anao hamaha io fiasa io nefa tsy mila miditra ny teny miafinao. Ity bibikely ity ihany dia hita ao amin'ny iOS 7.1 sy ny dikan-teny taloha voadinika ao amin'ny iOS 7, satria nanidy haingana an'ity lesoka ity i Apple, ary nijanona tsy nifanaraka tamin'ny kinova iOS 7.1.x. Ao amin'ny horonantsary etsy ambany no ahitanao ny fomba fiasan'ity bibikely ity.
Araka ny hitanao amin'ny horonantsary, manaraka dingana maromaro Azonao atao ny mamafa ny kaonty iCloud ary noho izany dia alefaso ny fiasa 'Find my iPhone', ary izany rehetra izany dia tsy mila miditra teny miafina.
Mazava ho azy, mba tsy hikoropaka ianao tokony ho fantatrao fa raha mametraka kaody hidy ao amin'ny terminal ianao dia tsy ho azo atao ny mamono io asa io.
Ny fomba fiasan'ity bibikely ity:
Mandeha amin'ny fikirakirana iCloud izahay, izay ho hitantsika ao anatin'ny fampiharana Fikirakira.
Miezaka mamafa ny kaonty iCloud izahay ary rehefa mangataka aminay ny tenimiafina dia hovonoinay ny iDevice.
Averinay indray izany.
Manokatra ny terminal izahay (zava-dehibe ny tsy fananan'izy ireo teny miafina).
Mandeha amin'ny menio Settings izahay, ary avy eo dia hiditra ny fikirana iCloud.
Kitikao ny kaonty iCloud hamafa.
Hamafisinay ny fanesorana ireo toe-javatra iCloud.
Raha vantany vao vita ireo dingana ireo dia azonao atao ny mamerina ilay fitaovana tsy misy fameperana. Misy zavatra mampidi-doza tokoa, fa ny tadidintsika dia tsy mandeha afa-tsy rehefa tsy manana tenimiafina hidin-trano ny fitaovanao.
Ahoana ny fomba hamohana iPhone mihidy amin'ny iCloud amin'ny iOS 8
Miverina ao amin'ny iOS 8, manam-pahaizana momba ny fiarovana no nahita hadisoana fiarovana matotra ao amin'ny fampiharana Mail zanatany, izay ahafahanao mamafa ny teny miafinao iCloud. Ity bug ity dia azo jerena ao amin'ny iOS 8.3 ary mifanentana amin'ireo fitaovana rehetra mampiasa io kinova iOS io. Araka ny filazan'ity manam-pahaizana ity, ny mailaka mailaka dia manana bibikely mamela antsika hanisy kaody HTML alaina lavitra ao anaty mailaka, manampy kaody miendrika tag izay tena clone fikandrana fidirana iCloud, ilay mitovy hita rehefa mitaky ny ampahafantaranay ny tenanay ho mpampiasa ara-dalàna an'ilay fitaovana i Apple.
Ity kaody ity dia azo alamina programa ka mandeha rehefa manokatra mailaka mivantana ianao mba hialana amin'ny ahiahy. Ity bitsika ity dia tsy mampiahiahy satria manana fahazarana ny iOS ary indraindray tsy misy antony mazava mangataka ny tenimiafintsika iCloud, noho izany dia tsy tokony hieritreritra ireo mpampiasa fa tsy mifanaraka amin'ny tena fangatahana avy amin'ny rafitra izany. Ny hany fomba hijerena raha fangatahana izay manandrana mangalatra ny tenimiafintsika na tena izy dia ny fanindriana ny bokotra Home. Raha tena misy ny fangatahana dia tsy hamela antsika handao ny efijery mangataka ny tenimiafina i iOS.
Amin'ity horonantsary ity dia azonao atao ny mijery ny fomba fiasan'ity bibikely ity izay ahafahanao mangalatra ny teny miafin'ireo fitaovana ampiasain'ny iOS 8.3.
Ahoana ny fomba hamohana iPhone mihidy amin'ny iCloud amin'ny iOS 9 / iOS 10 / iOS 11
Ny fomba tokana hanokafana fitaovana dia amin'ny fahalalana ny teny miafin'ny kaonty izay ifandraisan'ny terminal. Misy fomba hafa ahafahantsika mamaha ny terminal mampiasa rindranasa. Manokana, miresaka momba ny fampiharana DoulCi izahay, fampiharana maimaim-poana ho an'ny Mac sy Windows. ny Ity rindrambaiko ity dia miasa amin'ny famoronana server dummy mitovy amin'ny an'i Apple Io dia mamitaka tanteraka ilay fitaovana ary hanome antsika lakile iray izay tsy maintsy hidirantsika amin'ny fidirana iCloud, izay hamafana ny atiny rehetra ary tsy maintsy manampy ID vaovao isika.
Azo esorina amin'ny jailbreak ve ny hidin-trano iCloud?
Na dia maro aza ireo mpampiasa mampiasa ny jailbreak hametraka rindranasa piraty amin'ny tobiny, zavatra izay tsy anohananay ny Actualidad iPhone, ny jailbreak dia tsy natao ho an'izany fotsiny, fa ny tena ampiasain'ny mpampiasa maro dia ny manamboatra ny fitaovany amin'ny alàlan'ny fampidirana asa izay tsy ampidirin'i Apple. Tamin'ny alàlan'ny jailbreak tsy misy fitaovana mamela antsika hanala ny hidin-trano iCloud na esory ny terminal raha ampifandraisina amin'ny mpandraharaha manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Hitan'izy ireo fomba iray hamafana kaonty iCloud tsy misy teny miafina
Ho an'ny iphone 4 ihany io miaraka amin'ny iOS 7.1
maxim dia hoy izy:
tsy miasa afa-tsy amin'ny iphone ios 7.1.2 i berdad mio
Mamaly an'i maximto
Junior perez dia hoy izy:
Manana fanampiana ve ny olona hanakanana ny kaonty rahona?
Valiny tamin'i Junior Perez
nanao izany araka ny horonan-tsary ve ianao?
Mitsahatra, manao ahoana ianao, liana?
Rosalio dia hoy izy:
Nosakanako tamin'ny alàlan'ny iCloud
Mamaly an'i Rosalio
tsy nety tamiko io
Mamaly an'i hazsan
Margaret dia hoy izy:
Salama, eto avelako anao ny programa iray izay raha tena voasedra amin'ny iphone 5 16gb dia avelako ny rohy mega ho anao hampidina azy, esory izy ary dia izay ary hiseho ireo maodely rehetra
Raha manana lesoka ianao, andramo alefa ilay antivirus, niasa ho ahy izy io tamin'ny voalohany, misaotra
Mamaly an'i margaret
jesoa1207 dia hoy izy:
Mampandeha antivirus ?? toa ahy izany fa virus xD
Valio ny jesus1207
Salama, mieritreritra ve ianao fa tsy misy intsony ilay rohy, mieritreritra ve ianao fa afaka mandefa azy io hifehezana ny mailako, azafady?
Jose "Azabel the Ripper" Silver dia hoy izy:
Sady tsy mampiato ny antivirus no mihazakazaka ary tsy manome azy alalana amin'ny mpitantana
Valio an'i Josefa "Azabel the Ripper" Silver
Tena efa nahavita rakitra toa izany ve ianao ary efa notanterahinao ny fiarovana anao irery amin'ny zavatra natolon'ny olon-tsy fantatra anao izay tsy mahay manoratra tsara? Ratsy izao tontolo izao, tsy fantatrao ve fa mety ho varavarana ambadika (programa hahazoana fidirana tanteraka amin'ny solosainao PC nefa tsy hitanao) ary mety hangalatra ny angon-drakitrao saro-pady ary hahita ny cam-nao web? Ary raha lazainao etsy ambony fa tsy misy na inona na inona manomboka satria misy antony marim-pototra kokoa hampiahiahy, ity karazana malware ity dia mandeha any aoriana any amin'ny fomba "tsy hita" ho an'ny mpampiasa, na iza na iza nitantana azy dia manoro hevitra anao aho mba hanadio ny PC fa izao, azonao atao mampiasa scanner antivirus an'i Comodo, Hitman's na Dr. Web's.
Azabela ilay Ripper dia hoy izy:
Tokony halahelo an'i Margaret ianao raha mampakatra na manome rohy mankany amin'ny fisie izay tsy mandeha, farafaharatsiny misy olona tsy menatra mametraka ny fisie ary lasa mpikambana amin'ny zavatra kely ary mahazo karama ... x mangataka zavatra izy ireo fa very ny andronao .. malahelo ianao
Valio i Azabel the Ripper
Manandrana ny fomba hita ao amin'ny youtube miaraka amin'ny ios 7.1.1 Nanandrana nandritra ny roa andro aho. Tsy voafafa ny kaonty, saingy indray andro ny r sim 9 pro nanome ahy hadisoana ary naveriko indray ny iphone-ko. Rehefa namono ny telefaona aho dia tsy nanana ny kaonty taloha intsony, ka dia nosoratako ny kaontiko icloud ary niditra aho. Ary voalà!, Tsy nanana ny kaonty icloud hafa intsony aho, mba hahafahako mamerina azy io tsy misy ady 😀 Nandeha nitady ny icloud aho ary nahita ny findaiko manokana.
Fikarohana hitako ity programa ity ary niasa tamiko tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny iPhone 5c .. ary eto no hahitako raha mety aminao ihany koa
Manana iPhone 5s amin'ny finday aho nividy azy fa manana kaonty icloud tsy nasiako ny teny miafiko, ny kinova dia 7.1.2 Tiako ho fantatra raha misy fomba hanesorana an'io kaonty io ary nanandrana nanoroka ahy nijery horonan-tsary manome valiny izany saingy tsy nahomby aho mamafa ny kaonty ankehitriny ny antso dia tsy afaka manao antso miantso ahy ... tsy misy serivisy tsy maka fiara tsotra sim fantatro izay tokony hatao bebe kokoa
mitovy amiko isika miaraka amina iphone 4 = (
makamba dia hoy izy:
Manana 5c aho ary tsy hitako izay hamohana icloud, fantatrao ve izay programa alaina?
Mamaly ny makamba
programa ilaiko azy, adinoko ilay mailaka
israel4078 dia hoy izy:
tsy misy fomba ahafahan'ny fotoana mamoha icloud ka !! Aza adino ny tenimiafina jejejejjejejej na mety ho hitanao amin'ny appel manova ny teny miafina raha izany !! fa raha nangalatra ianao dia notahin'izy ireo.
Mamaly an'i israel4078
Angel Joaquin Aranda Terrero dia hoy izy:
Nosakanako ny Ipad 5 ahy satria ny kaonty Icloud dia amin'ny anaran'ny olon-kafa, raha misy olona afaka manampy ahy hifandray amiko amin'ny adiresy mailaka angelaranda@correodecuba.cu. malala-tanana amin'ny olona manampy ahy.
Valiny tamin'i Angel Joaquin Aranda Terrero
Tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny iPhone, ny fikirakirana, ny ankapobeny ary ny famerenana azy. Hamafana ny toerana sy ny atiny.
Aorian'izay dia averinao indray ary afaka miditra amin'ny kaonty hafa ianao.
Na mandeha any amin'ny Icloud.com ianao ary mangataka ny hamerenanao ny teny miafinao. Eto.
Raha tsy misy miasa ny iray amin'izy ireo dia azonao atao ny mitondra izany any amin'ny mpizara Ipod any amin'ny firenenao, izay hamerenany ny kaontinao, miaraka amin'ny fahafaha-manohana ny vaovao.
Aza adino ny manao backup alohan'ny hamerenana azy io amin'ny laoniny.
Machado140795 dia hoy izy:
ao anatin'io horonantsary io dia voamarika mazava tsara fa amin'ny alàlan'ny fanindriana miaraka amin'izay «mahita ny findaiko» ary «esory ny kaonty» izay tsy mety amin'ny dingana hamoha ny iphone
Kelvin Soto dia hoy izy:
Manana fomba azo antoka aho hanesorana ny icloud anao amin'ny fitaovanao iPhone ... (amin'ny 4 ka hatramin'ny 6 +)% 100 mahomby ... maharitra 4 ka hatramin'ny 5 andro ny dingana hanesorana azy. Izy io dia nanao izany tamin'ny alàlan'ny Imei an'ny fitaovanao. Raha mila fanazavana fanampiny dia andefaso mailaka aho fbwirelesstech2@gmail.com
Mamaly an'i kelvin soto
Moses Herrera Rodulfo dia hoy izy:
Salama. Azoko atao ny manampy anao hanala ny icloud afaka 30 minitra. mazava ho azy manana ny PROS sy CONS-ny. Manorata amiko http://www.facebook.com/thedevilinpersondie
Valiny tamin'i Moises Herrera Rodulfo
miasa amin'ny iOS 9.3.4
YakusaWolf dia hoy izy:
Androany mamoha iPhone 6S
Iza no te hanokatra?
Valio amin'i YakusaWolf
Salama!! Help My Apple Watch dia tsy mifandray satria ny kaontiko nananako taloha tamin'ny iPhone 6 dia adinoko ary nivarotra ny Cel aho fa amin'ity iPhone ity dia tsy azoko atao ny mampifandray azy satria mangataka ahy ny iCloud teo aloha an'ny an'ny Cel hafa ananako izy saingy tsy tadidiko izany. , ity ny Cel-ko vaovao ary nanao iCloud vaovao aho, inona no hataoko?
Alex Alfred dia hoy izy:
Valio amin'i Alex alfredo
Eliseo dia hoy izy:
Salama tsara, manana iPhone 4S miaraka amin'ny kaonty icloud aho izay afaka manampy ahy hamafa azy hampiasa azy io ho iPod.
Merruk Technology dia hoy izy:
Eto izy ireo dia esorin'i imei
Mamaly an'i Merruk Technolog
teknolojia merruk, fako madio ny rohinao.
Hernandez dia hoy izy:
Ry tolak'andro soa, nosakanako ny icloud an'ny iPhone 4s, iza no mahalala ny fanalana azy hanovana azy?
Mamaly an'i hernandez
Nividy tanana faharoa aho
iphone 5s fa manontany ahy icloud an'ilay olona izy satria efa nihetsika izy mitady ny iphone-ko misy vahaolana io
Manana iPhone 6 mihidy aho, misy mahalala rindrambaiko hamaha ICloud na Imei?
Manana iCloud mihidy iPad 2. Misy mahalala ny fomba hanesorana azy.
Mila ny angona iCloud (solonanarana sy tenimiafina) ianao
Luís, fantatro fa ny olana dia tanana faharoa… ary tsy manana ny angon-drakitra aho.
Tokony hifandray amin'ny tompony ianao amin'izay, tsy fantatro safidy hafa.
Manana ¡pad 2 aho ary tsy tadidiko ny teny miafin'ny Cloud, ahoana no ahafahako mamoha plsss. fitahiana
Manana ipad 3 aho ary tsy tadidiko ny teny miafiko, ahoana no hanokafako na hamafana azy?
Toa manana olana mitovy amin'ny ICloud daholo isika, tsy mbola nisy olona afaka mamafa ny kaonty raha tsy misy ny teny miafina, ka na iza na iza mahalala ny fomba anaovany azy dia mizara izany amin'ireo mila antsika koa. MISAOTRA ANAO!
Francisco Soliz dia hoy izy:
Catalina Manana iPhone 6 aho
misy inona ny serivisinao ???
Valio i francisco soliz
Fantatry ny rehetra fa tsy milalao amin'ny iPhone ianao ary aleonao mifaly tsy hahazo zavatra manana fiaviana misalasala hahahahahahahaha
Francis M. dia hoy izy:
Tsy hoe avy niahiahy izy ireo, fa bilaogy hangataka fanampiana kosa
Valiny tamin'i Francisco M
leyanis dia hoy izy:
hahaha, mahamenatra ahy ny nieritreritra fa izaho irery no nanana iPhone 5 mihidy, saingy hitako fa tsy irery aho azafady raha misy mahalala ny vahaolana hizara izany.
Mamaly an'i leyanis
Izaho dia manana iPhone 5 izay namidiny tamiko ary manana kaonty icloud izy, ary tiako ho fantatra ny fomba fanesorana azy sy ilay rangahy rehefa nahita an'io fa tsy naheno na inona na inona momba azy izahay.
Ahoana ny amiko, adinoko ny teny miafin'i aiclon ary ahoana no hamafana azy hametrahana hafa
Nividy iphone 5 ios 7.1.1 tanana faharoa aho ary nanana kaonty icloud. Nikaroka tao amin'ny Youtube aho dia nahita horonan-tsary ary afaka nanala ny kaonty teo aloha ary nametraka ny ahy. Mbola tsy azoko antoka raha hangataka ny kaontin'ny tompony teo aloha ny fanavaozana azy
sebastian rodriguez bogota dia hoy izy:
Hey inona ny horonantsary? : c
Mamaly an'i sebastian rodriguez bogota
Javier mx dia hoy izy:
Salama, nividy Mini iPad 3 an'ny taranaka faha-3 aho tamin'ny ezaka ilaiko ny iray amin'ilay fampirantiana fa tao no navelan'izy ireo ho iray tamin'ny 1500 sy ny telo x 2500. Tena nanompo ahy tamin'ny fomba tsara ny famongorana azy ireo tanteraka sy ny fivarotana ny tsirairay tamin'izy ireo, bateria, fikasihana, fampisehoana, bokotra, tandroka, trano, an-tserasera ary nividy vaovao iray tamin'izy telo aza aho, atolory ireo sombin-javatra, ny volafotsy ihany no ampiasaina sy ny fampianarana momba ny fomba famongorana sy famoahana voila, arahaba,
Mamaly an'i Javier mx
Jorge Reyes dia hoy izy:
hahahahahahahaha, horonan-tsary tsy misy dikany, zahao tsara ilay video hoe amin'ny fotoana ilaoanao ny iphone amin'ny keyboard pc dia miova ny fandraisam-peo ka tapaka ny horonan-tsary
Valiny tamin'i Jorge Reyes
octaviooo dia hoy izy:
Manana iPhone 5s efa naverina amin'ny laoniny aho ary mila esoriko ny icloud. Namidy tamiko ny iPhone ary tsy afaka mifampiresaka amin'ilay zaza aho mba hahafahany manome ahy ny apple id hahazoana ilay icloud. Misy manana programa hanalana ny icloud ve? Mba miangavy re.
Mamaly an'i octaviooo
Jean Piero dia hoy izy:
Izay rehetra manana iPhone manana kaonty dia mifandraisa amiko amin'ny iPhones sasany azonao atao tahaka ny hafa izy ireo, tsy miasa amin'ny bio bio aho ary mividy iPhone ary raha manana menio ny iPhone ary misokatra ny mailaka dia afaka mahazo ny kaonty aho. Avelako hiantso ahy hoe 990444745 mihitsy ao Chile
Valio i jean piero
heidi dia hoy izy:
Ahoana ny amin'ny fananako iPhone 4s dia manamarika ahy avy amin'ny icloud no nanala ny zavatra rehetra fa nampifandraisiko izy io saingy mitondra tsipika iray aho ary ny zava-drehetra dia tsy misy tatitra na zavatra azo atao eo… ..
Mamaly an'i pako
lucimarcastroparra dia hoy izy:
Salama maraina amboary ny iphone 4s miaraka amin'ny paoma id vita ao amin'ny hotmsil.com izany hoe nanao fahadisoana aho rehefa nanoratra ny hotmail.com dia ovao ny s. Rehefa nanao fanavaozana ny lozisialy dia nangataka tamiko ny id hamerenako azy io, saingy satria tsy tadidiko ny teny miafina momba an'io id io dia nosakanana ho fiarovana izy io. Rehefa manandrana mamoha io ID io dia mandefa kaody fiarovana amin'ny mailaka izay tsy misy ary tsy afaka namoha ny iPhone aho. Misaotra betsaka amin'ny fanampianao.
Mamaly an'i lucimarcastroparra
Salama daholo, nividy iPhone 5s tanana faharoa aho fa ny kaonty iCloud an'ny tompona teo aloha dia tavela, misy mahalala raha misy ny vahaolana azafady mila fanampiana aho. Izay rehetra azo mifandray amin'ny mailako s.jmg@hotmail.com na manorata amiko amin'ny whatsapp +573195107267
Tahaka izany, nosakanako icloud ny iPhone-ko ary tsy nisy antony nahafahako namoha azy.
Mencos dia hoy izy:
Tokony hamorona an'io mailaka tsy misy io ianao, na amin'ny tranga hafa raha misy izy dia tokony hokapohinao ilay mailaka ary jereo ny kaody.
Mamaly an'i Mencos
Amaryllis dia hoy izy:
Manana olana aho manana iPhone 5 c sy icloud ary apetrako ny mailaka sy ny teny miafiko ary tsy avelako hisintona na inona na inona izany ary tsy handefa hafatra kaody hahafahako misintona ny rindranasa hijerena raha afaka manampy ianao ahy
Valiny tamin'i Amarilis
Salama !! olona iray hampita anay ny angona raha afaka mamoha ny iphone-ny avy amin'ny icloud izy ireo hizara izany :( na ny zavatra nataon'izy ireo tamin'ny farany dia hitako ny zavatra vita an-tsoratra taloha be
Miala tsiny fa ny rohy nolalovanao dia milaza izao: «FITIAVANA TSY MISY: NY FITENY DIA MBOLA MISEHO SCREEN TOY IZAO:
* Ny hidin-trano iCloud dia tsy maintsy misy ny nomeraon-telefaona, aseho amin'ny sary.
Saingy amin'ny iPhone 4s-ko dia tsy miseho ny nomeraon-telefaona, miseho ho toy ny sary voalohany izy, mitovy ny fomba fanafoanana ny kaonty icloud?
Salama, mila olona matotra aho ary mahay manao tsara ilay asa .Manana asa hatao .. avelako ny mailako guillermofarias38@gmail.com WhatsApp 351-6180194
LIOM dia hoy izy:
Ry malala, tsy misy fomba fantatra, atsaharo ny fanodikodinana olona, ​​azafady aza omena ny antsipirian'ny karamanao, trout ny pejy !!!!
Valiny amin'i LIOM
John Torres dia hoy izy:
Manana iphone 5s aho ary tena te hampiasa azy, ny icloud ihany no manakana ahy :(
Ampio +52 044 656 312 8789
Valiny tamin'i Johcsan Torres
Ho ahy, ireo izay mangataka izany fampahalalana izany dia satria nividy fitaovana halatra izy ireo ary izany no mahatonga azy ireo ao anatin'izany toe-javatra izany. Mividiana fitaovana ara-dalàna fa tsy mangalatra !!!
Alfonso Zarate dia hoy izy:
hahaha, manome fihomehezana kely aho izay milaza amin'ny farany fa tsy misy fomba na inona na inona hanafoanana ny rahona, mazava ho azy fa misy, saingy mazava ho azy fa tsy hametraka ny fomba fanaovana azy io, sa tsy izany? Manana solosaina maherin'ny 20 eo anelanelan'ny iPhones sy ipad aho ary azoko lazaina aminao, fa raha azonao atao, dia maro ihany no tsy mahalala ny fomba hanaovana azy, raha lafo izany dia ekeko izany, izany no antony anolorana azy ho fitaovana izay manana index index lafo be eny an-tsena Eny, famoahana icloud dia mitentina 2500 pesos Meksikana.
Valiny tamin'i Alfonso Zarate
kanos dia hoy izy:
Alfonzo ve misy pejy izay amporisihanao ahy handoa vola hamaha ny iphone-ko izay azo antoka fa tsy hamitaka ahy izy ireo
Mamaly an'i kanos
david cross dia hoy izy:
Inona avy ireo rindranasa ilaiko hamohana ny iPhone 8plus? Vonjeo
Valio i David cruz
GERARDO GARCIA PAEZ dia hoy izy:
NY FANAMORANA NY ICLOUD AZO ATAO AMIN'NY FOMBA FOMBA FITSABOANA NY MARINA FA NY FOMBA FANAM-PAHASALAMANA, TSY MISY CONTACT TSARA AMIN'NY telefaona ... SA AMIN'NY APLIKO MX HAHAHA ARY VITA, RAHA MBOLA HAHALALANA NY FOMBA IZANY? IRAY MAHAZO NY DATABASE NY DUEL ORIGINAL ARY miantso appel mivantana milaza ny andininy tadiavin'izy ireo momba ny fitaovan'izy ireo, amin'ny alàlan'ny fananana ny daty momba ny tompona tany am-boalohany, dia voavaly ary efa voahazona ny safidy. AMIN'NY Fividianana INVOICE FITAOVANA FAMPIANARANA ARY HANGATAKA NY FANAMPIANA AZY AMIN'NY MAILA ARY INDRINDRA ARY NY TRICKS tsara ihany. GERAGP2011@HOTMAIL.COM
Valio amin'i GERARDO GARCIA PAEZ
kikeyeny@gmail.com dia hoy izy:
Manana iphone 6s aho, ahoana no fomba hanesorako ny kaonty icloud?
Valio i kikeyeny@gmail.com
heck an'ny rafozambaviko ny findaiko ary namorona id vaovao ho an'ny findainy vaovao izy ary ny ahy tsy mahatadidy tenimiafina na zavatra hafa ... ahoana no hataoko hametrahana ny kaontiko icloud?
Mbola manana iphone 6s miaraka amin'i icloud aho milaza amiko fa afaka mitsambikina amin'ny r sim ianao dia marina
Salama maraina ry namana ato amin'ny fanamboarana ny seranan-tsambo dia mamoha haingana ny fitaovanao icloud haingana sy tsy misy olana mivantana izahay eo an-toerana na an-tserasera, ho fanampin'izany, FITAOVANA TEKNIKA CERTIFIED fitaovana manokana sy natao ho an'ny famohana, famoahana ary fanamboarana fitaovana, azonao atao ny mifandray aminay amin'ny whatsapp + 52 2292225800
Raha avy any Veracruz ianao dia miangavy amin'i Francisco Canal 962 eo anelanelan'ny Hidalgo sy Independencia Colonia Centro
taeyang dia hoy izy:
Ny fomba famohana iPhone 5s iOS 11 dia tanana faharoa ary tsy fantatry ny tompony hoe ahoana ny fomba hamohana azy hampiasa azy. Manontany ahy mailaka avy amin'ny j *****@www.l *****.cl izy ireo ary tsy haiko hoe inona ilay mailaka na iza no MANAMPY !!!!.
Mamaly an'i taeyang
Azonao atao ve ny manampy ahy hamaha ny ihpone 5 dia amin'ny icloud
MANAO fomba hanalana ny ICLOUD aho, teo anelanelan'ny 30 sy 40 DOLARARA miankina amin'ny modely.
-EFA HANANANAY EFI INDRINDRA VE I MAC
Osniel dia hoy izy:
Manana Iphone 6s Plus aho ary nosakanan'ny icloud, azafady mba ampio aho, manorata any osniel86@nauta.cuarahaba avy any Kiobà
Valiny tamin'i Osniel
Salama alina, mampahafantatra anao aho fa mamoha iCloud iPhone 6 na 6s aho ary mipetraka any Arzantina aho mandefa ny nomeraonareo ho an'ireo liana ity maodely ity no mora indrindra satria manana ny fitaovana rehetra aho raha mila manokatra maodely hafa an'ny iPhone ianao dia afaka manomana ny fitaovana ilaina ary sokafy.
roxe dia hoy izy:
Salama aho mila mamoha iPhone s6 tany am-boalohany azafady mba ampio, novidiko fanindroany io ary rehefa averiko amin'ny orinasa io dia miseho ny iCloud an'ilay olona teo aloha, ary tamin'ny alàlan'ny Messenger sy wasap dia nifampiresaka aho fa rehefa nandeha tsara Nofafako io ary tsy afaka nifandray taminy intsony aho.
Valiny amin'i Roxe
Anabella dia hoy izy:
Avy any Arzantina aho
Raha hamaha iPhone 6s plus. Ahoana no hatao?
Valio amin'i Anabella
Melchior dia hoy izy:
Salama tolak'andro tsara, manana iphone 6s 128gb aho, navadika icloud. Manontany an'ireo informatika rehetra mahalala ny fanaovana azy aho. Ireo no mpifanerasera amiko. Nve2251 @ gmail. fr
Young_usher @ hotmail. fr
Valiny tamin'i Melchor
Salama aho manana iphone 6s voasakana miaraka amin'i icloud afaka manampy ahy ny nomeko 0039 328 0722160 mail: gato.cuba73@gmail.com
Salama, manana iPhone 6s voasakana amin'ny kaonty icloud aho, raisiko amina ituns, saingy tsy avelako hanavao azy io, ampio aho hamaha xfa 9982319697
Mamaly an'i marcus
Salama namana, hita fa nahita 6s tao amina magazay aho rehefa niantsena, iray volana mahery lasa izay ary mbola tsy niantso ny tompony, tiako ho fantatra raha misy fomba hifandraisana aminy,
Salama tsara fa manana iphone 7 sy 6s aho hamaha icloud ahoana no ahaizantsika ... izay manampy ahy
ny mailako: rafaelduben_cruiser@live.com
Te hahafantatra ny fomba hanesorako ny kaonty icloud amin'ny iphone 6s aho. Misaotra anao
mpandresy hugo dia hoy izy:
Salama tsy fantatra anarana; manana iphone 6 (16gs) mihidy icloud aho ary naveriko tamin'ny ios1.4.1 ary tsy misy fomba hamohana azy ity tiako ho fantatra hoe inona no tokony ho hitanao raha afaka mamoha azy ianao ...
manao hoe atte victorio2006@gmail.com ity ny mailako manokana ..
Avy any Bariloche aho ………
Mamaly an'i victor hugo
Alfredo Moran Lem dia hoy izy:
mila fanampiana aho, hamaha iphone
Valiny tamin'i Alfredo MOran Lem
leonardo bautista dia hoy izy:
Salama sakaiza Mila ny fanampianao aho Manova ny telefaoniko amin'ny telefaona 6s amin'ny fotoana fanovana azy io dia aza manamarina raha tsy mandra-pahatongako any an-trano ary naverina naverina naverina novokarina ny telefaona ary nangataka ny kaonty Icloud izay tsy fantatro fa atoro anao aho. Very ny findaiko sa misy vahaolana
Valiny tamin'i Leonardo Bautista
Nandritra ny fanamboarana finday dia nanampy ahy tamin'ny famoahana sy ny famohana iPhone 7 izay nanana lisitra mainty aho ary nanana icloud fa nalaiko tany izy ireo no namoha azy ireo ary namoaka azy ireo navelako ny nomeraon-dry zareo 2292225800, manome anao aho mba hanamarina anao any na aiza amin'ny tenako manokana no anolorako azy ireo satria toerana ara-batana io, nanandrana pejy fb maro aho ary nofitahin'izy ireo mihoatra ny indray mandeha aho, arahaba soa
Fako madio, makà fepetra hanaraka efa ao anatin'ny rafitra. Toy ny $% / &% dia hataontsika izany raha io indrindra no tsy vitantsika.
yanel dia hoy izy:
Ny renibeko dia nandefa ahy ny iphone-ny, xr izy fa nanadino ny zava-drehetra, tsy tadidiny ny mailaka na ny teny miafiko, ahoana no fomba hamahako azy, nanandrana tamin'ny lafiny rehetra aho ary tsy nisy nanampy
Mamaly an'i yanel